သင်၏ကုန်ကြမ်းအမှုန့်၌မပါလျှင်,မင်းလိုတယ် အစာကြိတ်ခွဲစက်,ပစ္စည်းကိုကြိတ်ခွဲခြင်းသည်ရေတည်ငြိမ်မှုနှင့်အစာတောင့်များ၏အစာချေဖျက်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇယ်အစာသံတူစက်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးသောသံတူစက်တို့သည်သင်၏ငါးအစာလုံးလေးပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောငါးအစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက်ကြိတ်ခွဲစက်များကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်.
ရောနှောခြင်းသည်အရည်အသွေးသေချာစေရန်နှင့်အစာကျွေးခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်. ကျနော်တို့ငါးအစာပါဝင်ပစ္စည်းများရောနှောဖို့အလျားလိုက်ဖဲကြိုး feed ကိုရောနှောပေး, အညီအမျှရောထွေးနိုငျသညျ. အကြီးစားတင်ကိန်း, သေးငယ်တဲ့ကြမ်းပြင်areaရိယာ, အဆိုပါရောနှောကျယ်ပြန့် feed ကိုစက်ရုံအတွက်အသုံးပြုသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးအစာထုတ်လုပ်ရေးစက်ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်: ခြောက်သွေ့သောအမျိုးအစား ငါးတောင့်စက် နှင့်စိုစွတ်သောအမျိုးအစား extruder အစာကျွေး. ရေစိုသောငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်အေးစက်။ ရေနွေးငွေ့စက်ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်. ခြောက်သွေ့သောငါးအစာပြုပြင်စက်သည်စိုစွတ်သောရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသည်, ထို့ကြောင့်များသောအားဖြင့်စိုစွတ်သောအမျိုးအစားရှိသောရေကူးငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်ကြီးမားသောအစာတောင့်စက်ရုံအတွက်သင့်တော်ပြီးခြောက်သွေ့သောရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်စက်ရုံအတွက် ပို၍ သင့်တော်သည်။.
ကျွန်ုပ်တို့၏ mesh belt dryer သည်အမြဲတမ်း convective belt dryer ဖြစ်ပါသည်. ရေပေါ်ငါးအစာကျွေးခြင်းစက်မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သောအတောင့်များကိုဝါယာကြိုးကွက်များ (သို့) ဖောက်ထားသည့်ပန်းကန်ခါးပတ်ပေါ်တင်ပေါ်တွင်အလွှာများတပ်ဆင်ပြီးခြောက်သွေ့သောအခန်းများမှတဆင့်အဆက်မပြတ်သယ်ဆောင်သည်. ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း, ခြောက်သွေ့သောလေထုသည်ထုတ်ကုန်များအလွှာမှတဆင့်အကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်သန်းသွားသည်. သငျသညျစိုစွတ်သောအမျိုးအစားရေပေါ်ငါးအစာကျွေးထုတ်လုပ်မှုစက်ကိုရွေးချယ်ပါလျှင်, ကျနော်တို့ဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစားလုံးလေးများလေမှုတ်စက်အကြံပြုပါသည်.
အချောတောင့်များကိုသိမ်းဆည်းရန်လွယ်ကူစေရန်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဖောက်သည်များ၏မျက်စိဖမ်း, သူတို့စနစ်တကျထုပ်ပိုးရပါမည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီလက်ထရောနစ်နှင့်အတူ အလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစက်, အချောတောင့်အိတ်သို့ထုပ်ပိုးနိုင်ပါတယ်, အလေးချိန်, ပါး, နှင့်အလိုအလျှောက်တံဆိပ်ခတ်, ၎င်းသည်လုပ်အားနှင့်အချိန်ကုန်သက်သာပြီးအကြီးစားထုတ်လုပ်မှု၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်. ဒီထုပ်ပိုးစက်သည်, အလိုအလျောက်အပူစာရိုက်ကုဒ်, အလိုအလျောက်အိတ်အပ်နှင့်အလိုအလျောက်ချည်ဖြတ်တောက်ခြင်း optional ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနိုင်ပါတယ်.